09/01/12 ~ Myanmar Forward
အိန္ဒိယစစ်ဘက်ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်း တိုက်မိသဖြင့် လေတပ်သား ၈ ဦးသေဆုံး
Posted by drmyochit Saturday, September 01, 2012, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် စစ်ဘက်သုံး ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်း လေထဲတွင် တိုက်မိ ရာ လေတပ်သား (၈)ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရှိရသည်။ နိုင်ငံ အနောက် ပိုင်း ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားသော မတော်တဆမှုသည် အိန္ဒိယ လေတပ်အတွက် ဆိုးရွားသော ထိခိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာစေခဲ့သည်။
အိန္ဒိယလေတပ် မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိက ရဟတ်ယာဉ် နှစ်စင်း သည် လေ့ကျင့် ပျံသန်းမှု ပြုလုပ်ရင်း နားလည်မှုလွဲကာ ဝင်တိုက်မိခဲ့ခြင်း ဟု ပြောကြား သွားသည်။
ဗိုလ်ကြီး အမ်ဂျီမာတာက ပျက်ကျသွားသော ရဟတ်ယာဉ် နှစ်စင်းလုံးသည် ရုရှားလုပ် Mil MI-17 အမျိုးအစားများ ဖြစ်ကြကြောင်း သတင်းထောက်များထံ ပြောဆိုသွား ခဲ့သည်။ လေထဲတွင် နှစ်စင်းဝင်တိုက်မိလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အမှားအယွင်းနှင့် ပတ်သက် ပြီး လေတပ် က စုံစမ်းမှုများ ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ကြာဿပတေးနေ့က ဂျမ်နာဂျာ မြို့အနီးတွင် ဖြစ်ပွားသော မတော်တဆမှုတွင် ရဟတ်ယာဉ် တစ်စင်းသည် ဆိုးဆိုးရွားရွား မီးလောင်သွားကြောင်း မျက်မြင်များက ဆိုသည်။ ရဟတ်ယာဉ်များသည် အချင်းချင်း တိုက်မိပြီးနောက် အနီးရှိ လယ်ကွင်းများထဲ ပျက်ကျသွားခဲ့သည်။ ယခုအခါ တစ်စစီ ပြန့်ကျဲနေသော အပိုင်းအစများကို ပြန်လည်စုစည်းကာ ဂျမ်နာဂျာမြို့ရှိ လေတပ် အခြေစိုက် စခန်းသို့ ပြန်လည် သယ်ယူမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Saturday, September 01, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
၂ ဦးကို လက်နက်များနှင့် အတူ ထိုင်း
-မြန်မာနယ်စပ်တွင် ထိုင်းအာဏာပိုင်များက ယနေ့ ဖမ်းဆီးလိုက်သည်။
လက်နက်များကို ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းရိုင် ခရိုင် မဲ့ဖာလွန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တွင် ထိုင်း အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးရမိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သက်သေခံ ပစ္စည်းများ အဖြစ် ဖမ်းဆီးရမိသော လက်နက်များထဲတွင် ၇၉ မမ လောင်ချာ ၁၉ လက်၊
အေကေ (၄၇) သေနတ် ၂၈ လက် စသည့် လက်နက်မျိုးစုံ တို့ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း
သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနမှ အယ်ဒီတာ ဦးခွန်စိုင်းကမူ ထိုင်း ရဲအရာရှိ တဦးကို ကိုးကား၍ နောက်ဆုံးရရှိ ထားသည့် သတင်း အရ လက်နက်များကို “၀” ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ရောင်းရန်အတွက် ဖြစ်ကြောင်း အဖမ်းခံရသူများက ထွက်ဆိုခဲ့သည်ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီနေရာမှာ SSA လည်း ရှိတယ်၊ ၀ လည်း ရှိတယ်၊ ပြည်သူ့စစ်လည်း ရှိတယ် ဆိုတော့
ဘယ်သူမဆို ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ သို့သော် လည်း တဖက်က ဒီထွက်ဆိုတဲ့ လူကလည်း
ဖမ်းမိပြီးဆိုတော့ လိမ်စရာ အကြောင်းမရှိတော့လို့ ထင်တယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သို့သော် မည့်သည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်ကြောင်း
ဧရာဝတီ သတင်းက သီးခြား အတည် ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့တွင် ချင်းရိုင်မြို့၌ ထိုင်းအာဏာပိုင်များက
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ တရပ်ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် တာချီလိတ် မြို့နယ်ဘက်သို့ လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်နေသူဟု ယူဆရသော ထိုင်း နိုင်ငံသား ၁ ဦး ကို လက်နက်များနှင့်အတူ
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ဖမ်းမိခဲ့သေးသည်။
ထိုစဉ်ကလည်း အာပီဂျီ လောင်ချာ ၁၂ လက်၊ အေကေ ၄၇ မောင်း ပြန် ရိုင်ဖယ် ၁၇ လက်၊ အမ် ၁၆ မောင်းပြန် ရိုင်ဖယ် ၆ လက်၊ အမ် ၇၉ လောင်ချာ ၁၂ လက်နှင့် အာပီဂျီ ဗုံးသီး ၉ လုံး တို့ကို ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့ကြောင်း ထိုင်း သတင်းများက ဖော်ပြကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း၌လည်း UWSA တပ်ဖွဲ့ အတွက် လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ကိုင်နေသူဟု ယူဆရသော ထိုင်းနိုင်ငံသား ၂ ဦးကို လက်နက်များနှင့် အတူ ထိုင်းအာဏာ
ထိုစဉ်က သေသေခံ ပစ္စည်းများ အဖြစ် ၉ မမ ပစ္စတို ၅၆ လက်၊ သေနတ်ပြောင်းရှည် ၂ လက်၊
၆၀ မမ လောင်ဂျာ နှင့် သေနတ် ကျည်ဆန် အတောင့် ၂၀၀၀ တို့ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
မယ်ဆိုင်မြို့ တဖက်ကမ်းရှိ တာချီလိတ်မြို့သည် အစိုးရ စစ်တပ်၊ ရဲ၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး (လ၀က)၊ အကောက်အခွန်၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးယူထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေသူများ ကျင်လည် ကျက်စားနေသော မြို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
KIA အား လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် အစိုးရ ရှေ့တန်း တပ်များက တောင်းဆိုလာ
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် စစ်ဆင်ရေး
လေကြောင်း စစ်ဆင်မှုကိုပါ အသုံးပြု
လာဖွယ် ရှိသည်ဟု ကချင်ပြည်
လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) စစ်ဌာနချုပ်မှ တပ်မှူး တဦးက ရွှေဟင်္သာသတင်း
ဌာနကို ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
“ KIA ကလည်း တန်ပြန်နေတယ်လေ။ သူတို့ကတော့ ရှေ့မတိုးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒါကိုကျော်လွှားဖို့ ထင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ ပွိုင့် တွေကိုလေကြောင်းနဲ့ ဗုံးကျဲ ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး၊ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရေးစက်နဲ့ အကူအညီတောင်းနေ တယ်။
နေပြည်တော်ကတော့ ဘာအမိန့်ချမလဲတော့ မသိဘူး။ လောလောတော့ငြိမ်နေတယ်။
စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ အဲဒီအတွက် အစကတည်းကပြင်ထားပြီးသားပါ
အထူးသဖြင့် လိုင်ဇာ စစ်မျာက်နှာရှိ KIA တပ်များနေရာယူထားသော တောင်ကုန်းပွိုင့်များကို ဗုံးကြဲဖွယ်ရှိသည်ဟု KIA ဖက် မှခန့်မှန်းထားပါသည်။
သို့သော် KIA ၏ အစိုးရရှေ့တန်း စစ်တပ်အတွက် ထောက်ပံ့ရေး ရိက္ခာလမ်းကြောင်းများကို ဖြတ် တောက်သည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် ရှေ့တန်း တပ်ဖွဲ့များတွင် ရိက္ခာပြသနာဖြစ်ဖွယ်ရှိနေပါသည်။
ဤပြသနာကို အစိုးရဖက်က လေကြောင်းနည်းဖြင့် ရိက္ခာနှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များ ချပေးနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါသည်။
KIA ၏ခံကတုတ်များ (ဓါတ်ပုံ KIA)
KIA သည် ၄င်းတို့၏ တန်ပြန်ထိုးစစ်ကို၊ စခန်းသိမ်းချေမှုန်းရေး တိုက်ပွဲများ အပါဝင် ပျောက်ကျားစနစ်နှင့်၊ မိုင်းစစ်ဆင်ရေး နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပြီး အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များအား ပြန်လည် တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
အထူးသဖြင့် လိုင်ဇာစစ် မျက်နှာ၊၀ိုင်းမော်နှင့် တပ်မဟာ (၅) ဧရိယာ၊ တပ်မဟာ (၃)နှင့် တပ်မဟာ (၄) ဧရိယာ နှင့် ဖါးကန့်နယ်ရှိ KIA တပ်ရင်း (၃) ဧရိယာ၌ နေ့စဉ် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပါသည်။
အစိုးရ တပ်ဖွဲများသည်လည်း KIA တပ်ဖွဲ့များ၏ တန်ပြန်မှုကို တန်ပြန်စစ်ဆင်ရေးဖြင့် တုန့်ပြန်နေသည်ဟုဆိုပါသည်။
ဤ ကဲ့သို့ ပြင်းထန်လာနေသော စစ်ရေးအခြေအနေကြောင့် ကချင် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ တိုးလာနေပြီး ယခုဆိုလျှင် ဒုက္ခသည်များ တသိန်းဝန်းကျင်ခန့် ရှိလာနေ ပြီးဟု ဒုက္ခသည်ကော် မီတီ များက ခန့်မှန်းနေပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဖါးကန့်ဒေသ၌ ကျေးရွာ (၁၁) ရွာမှ လူထုများ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များက ထပ်မံ အမိန့်ပေးထားသည်ဟု ဒေသခံများကဆိုပါ သည်။
ဤကဲ့သို့ KIA နှင့်အစိုးရတို့၏ ရှေ့မတိုးသာ ဖြစ်နေသော ပြသနာကို ၀ိုင်းဝန်း ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် အမေရိကန်နိုင်ငံက တ ရုတ်နိုင်ငံအား တောင်းဆိုထားကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်တခု၌ တွေ့ရပါသည်။
ထို့အပြင် ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များက အကူအညီပေး
နိုင်ရန် တရုတ်နယ်မြေကို အသုံးပြု ခွင့်ပေးရန် လည်းတောင်းဆိုထားပါသည်။
ဤစစ်ပွဲသည်၊ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် အစိုးရသဘောထား၏ နောက်ဆက်တွဲပြသနာဟု KIA ကခံယူသလို မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အကူအညီပေးနေသော နော်ဝေးနိုင်ငံမှ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) ကလည်း မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အစိုးရမှ KIA အပေါ် ထားရှိသောသဘောထား၌ မူတည်သည်ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါသည်။
မိုးသီးဇွန်ခေါင်းဆောင်သည့် ၁၁ဦးအဖွဲသည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန်ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့
ယနေ့1.9.2012 နံနက် ၈ နာရီကျော်က ရောက်ရှိလာသည်။
၎င်းတို့အဖွဲ့ကို လူဘောင်သစ်ပါတီအဖွဲ့အပါအ၀င်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ အမ
ပြည်တွင်း၌နေထိုင်ခွင့် ဘယ်လောက်ရသလဲ ၎င်းတို့ မသိဘူးကြောင်းခန့်မှန်းချေနေ
ထိုင်ခွင့် တလခန့့် ရမည်ဟု အဖွဲ့တွင်းပါလာသူတစ်ဦးကပြောသည်။
ယနေ့ ရန်ကုန်သို့ ရောက်ရောက်ခြင်းေ၇ွှတိဂုံဘုရားနှင့်အင်းယားကန်သို့ သွားရောက်
ယခုလ ၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်း
စာရှင်းလင်းပွဲ ကို ယုဇနဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်မည်ဟုသိရသည်
Popular news journa
မကြာခင် လက်ထပ်တော့မယ့် အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖူးစာ
Posted by drmyochit Saturday, September 01, 2012, under သတင်းများ | No comments
ထူးခြားတဲ့ဒီဓာတ်ပုံ Facebook ကို
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က ရောက်လာပါတယ်။
အမျိုးသားနှစ်ဦး လက်ထပ်ပွဲလုပ်တော့မယ့် ပုံစံမျိုး ခန့်ခန့်ငြားငြား၊ ခမ်းခမ်းနားနား ရိုက်ကူး
အမှန်တကယ်လည်း သူတို့ နှစ်ဦး လက်ထပ်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
တယောက်က မြန်မာပြည်က၊ တယောက်က စင်္ကာပူကလို့ ဆိုပါတယ်။
ဓာတ်ပုံဆရာကတော့ "real couple with Myanmar traditional wedding setting" ( မြန်မာ့ရိုးရာ မင်္ဂလာအခမ်းအနားနဲ့ တကယ့် စုံတွဲ) လို့ သူ ဖဘမှာ ရေးထားတာပါ။
"its pre-wedding, actually reception will be in dec" မင်္ဂလာပွဲအကြို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာ၊ လက်ထပ်အခမ်းအနားကတော့ ဒီဇင်ဘာမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ် တဲ့။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအကြို အလှရိုက်ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ပြီး အများအပြားက
ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။ တယောက်က ဆိုရင် "မြန်မာ့ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲသည် လိင်တူချင်းလက်ထပ်ရန်မဟုတ်...." လို့ မှတ်ချက်ချ ရေးထားပါတယ်။
လိင်တူ လက်ထပ်တာ ထောက်ခံတယ် လို့ ဓာတ်ပုံဆရာက ဆိုပါတယ်။
နောက်တယောက်ကတော့ Facebook မှာ အခုလို ရေးထားပါတယ်။
တချို့က ငါးပိ မကြိုက်ဘူး
အဲဒီတော့ ငါးပိမကြိုက်တဲ့သူတွေက ငါးပိကြိုက်တဲ့သူတွေကို စိတ်ရောဂါသည် ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဝေဒနာသည်လို့ သတ်မှတ်လို့ရလို့လား???
အဲဒီလိုပဲ သူ့လိင်စိတ်ခံယူမှုအရ သူ့ရွေးချယ်မှုကိုတော့ စိတ်ရောဂါတစ်ခုလိုသတ်မှတ်တာကတော့ သိပ်ပြီး ဘဝင်မကျဘူး
နောက်တစ်ချက်က အချစ်ဆိုတာ စိတ်ကထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာက မသင့်တော်
ဥပမာ မလွတ်လပ်သူ အရွယ်မရောက်သေးသူ စသဖြင့်ပေါ့
သူတို့ဘာသာ လွတ်လပ်သူအချင်းချင်း စိတ်တူသဘောတူ ချစ်ကြ ကြိုက်ကြ ယူကြတာကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုပါ"
လိင်တူ လက်ထပ်တာကို ကမ္ဘာ့ ဒေသတချို့မှာ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
တယောက်က အခုလို မှတ်ချက်ရေးထားပါတယ် -
"သေချာတာက မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေထဲတော့ မပါဘူး။
လိင်တူခြင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖို့အတွက် သီးသန့်ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ လိုမယ် ထင်တယ်။
အရေးကြီးဥပဒေတွေ ဦးစားပေးနေရတဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီကိစ္စ အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက် တော်တော်လေးလိုဦးမယ်..."
ဒီအကြောင်းအရာဟာ တချိန်မှာ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အကြိတ်အနယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေကို ရောက်ဖို့ကတော့ အချိန်အတော်ကြာအုံးမယ်လို့
Posted by drmyochit Saturday, September 01, 2012, under ဆောင်းပါး | No comments
Posted by drmyochit Saturday, September 01, 2012, under ဓါတ်ပုံသတင်း | No comments
ထို့အပြင် ထပ်မံ အလင်းဝင် ရောက်မည့် အဖွဲ့ဝင်များလည်း ရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ (ဝန်ကြီးဌာန အတို:၊အလျှော့)
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ၀န်ကြီးဌာန အရေအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရေ တိုး/လျော့ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကထံသို့ သြဂုတ်လ ၂၉ရက်နေ့နှင့် သြဂုတ်လ ၃၁ရက်နေ့ ရက်စွဲများဖြင့် သ၀ဏ်လွှာများပေးပို့ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသ၀ဏ်လွှာများတွင် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနများအား လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းသို့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လိုခြင်း၊ မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအား ဖျက်သိမ်းနိုင်ရေးများအတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ရယူပေးနိုင်ပါရန် သ၀ဏ်လွှာပေးပို့အပ်ပါကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန (၃၄) ခုအနက် အမှတ်(၁)၊ (၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနများကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်လည်းကောင်း၊ အမှတ် (၁)၊(၂)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနများကို လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သမ္မတရုံး ၀န်ကြီးဌာနကို ၀န်ကြီးဌာန (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)အဖြစ်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲ၍ မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကို ဖျက်သိမ်းကာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန (၃၆)ခုအဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လိုပြီး ၀န်ကြီးဦးရေကိုလည်း မူလ (၃၄) ဌာနတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (၃၀) ဦးခန့်အပ်ခဲ့ရာမှ ယခု (၃၆) ဌာနတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (၃၆) ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုနိုင်ပါရေး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ရလိုပါကြောင်း သ၀ဏ်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ နှင့် နည်းဥပဒေ ၂၄ တို့အရ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ၀န်ကြီးဌာနအရေအတွက်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရေကို အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ တိုး/လျော့ခြင်း ပြုလုပ်လိုကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ တင်ပြချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ တင်ပြချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်က အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ပါ၍ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးလိုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်း ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်းနှင့် စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကက အသိပေး ကြေညာထားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအား ဖျက်သိမ်းရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ရယူပေးနိုင်ရန် ပေးပို့ သည့် သ၀ဏ်လွှာ
စာအမှတ်၊ ၁၀၇ (၀၁)/၈/သမ္မတရုံး
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်
၁။အစိုးရသစ် တာဝန်ယူစအချိန်တွင် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန (၂)ဌာနကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ် ဦးမှ တာဝန်ယူ၍ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။သို့သော်လည်း လတ်တလော အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး အချိန်ယူပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသောကြောင့် အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ သို့ပါ၍ မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနအား ဖျက်သိမ်းနိုင်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၀၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ရယူ ပေးနိုင်ပါရန် သ၀ဏ်လွှာပေးပို့အပ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အရေးပေါ် နေပြည်တော်ဆေးရုံ တင်ရ
From : မောင်ကာလု
ယမန်နေ့ ညမြန်မာစံတော်ချိန် 8နာရီ အချိန်၌ ဒေါ်စုသည် ရုတ်တရပ် နှလုံးအမောဖောက်လာသဖြင့် နေပြည်တော်ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်..
ဖြစ်စဉ်မှာ.. ယခုအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း NLD ပါတီဝင်များမှ လည်ကောင်းတို့ ပါတီကို ပြန်လည် ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပေါ်သဖြင့်....ထို့သို့ ဆန္ဒပြမှုများကို ယခုအချိန်ထိ မဖြေ ရှင်းနိုင်သေး ခြင်း ထို့ပြင် ဒေါ်စုမှာ သူမ၏ပါတီကို ပြန်လည် မထိန်းမသိမ်းနိုင်ခြင်းနှင့် သူမ၏ အာဏာရှင်ဆန်းမှု များကြောင့် ပါတီဝင်များမှ အယုံကြည်မရှိတော့ချင်းများကို ရင်ဆိုင်နေရပါသဖြင့် ယမန်နေ့ ည8 နာရီ အချိန်တွင် ဆန္ဒပြသူများနှင့် ဖုန်းမှတဆင့် ညှိနှိုင်းမှုများပြုနေစဉ်အတွင်းမှာပင် ထို့သို့ နှလုံးအမောဖောက်လာသဖြင့် ဆေးရုံသို့အရေးပေါ်တင်ရကြောင်းသိရှိရပါသည်...
တဆက်တည်.. ယခုအချိန်တွင် ကျန်းမားရေးပြန်လည်ကောင်မွန်လာပြီးဟုလည် သိရပါသည်.. ဒေါ်စု သည်.. သားအိမ်ကင်ဆာပါ ရှိနေသဖြင့် စိုးရိမ်းရသည်ဟုသိရပါသည်...။
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ထိုင်းအစိုးရကို ထားဝယ်သို့ ချိတ်ဆက်မည့် ရထားလမ်း (သို့) ကားလမ်းမတစ်ခု တည်ထောင်ရန်တိုက်တွန်း အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ထိုင်းအစိုးရကို ထားဝယ်သို့ ချိတ်ဆက်မည့် ရထားလမ်း (သို့) ကားလမ်းမတစ်ခု တည်ထောင်ရန်တိုက်တွန်း အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ထိုင်းအစိုးရကို ထားဝယ်သို့ ချိတ်ဆက်မည့် ရထားလမ်း (သို့) ကားလမ်းမတစ်ခု တည်ထောင်ရန်တိုက်တွန်း
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB)သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြေခံအဆောက် အအုံနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားရန် ထိုင်းအစိုးရအား တိုက်တွန်း လိုက်ပြီး ထိုသို့ လုပ်ခြင်းဖြင့် ထား ၀ယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းကြီး ၌ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ နှင့် ဘဏ္ဍာ
ရေးသမားများ ပိုမို လွယ်ကူစွာ ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောကြားလိုက်သည်။
ADB ၏ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ခရိတ်စတက်ဖင် ဆန်က ထိုင်းနိုင်ငံ နွန်သာဘူရီ ပြည်နယ်၏ ဘန်ရိုင်ခရိုင်နှင့် ကန် ချနဘူရီပြည်နယ်တို့အကြား ဖောက်လုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ကားလမ်းအပြင် ထိုင်းအစိုးရသည် ထားဝယ်သို့ နယ်စပ်ဖြတ်ကာ
ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် ရထားလမ်း (သို့မဟုတ်) ကား လမ်းမတစ်ခုကို တည်ထောင်ရေး ကို စီစဉ်သင့်ကြောင်း ယမန်နေ့က အကြံပြုခဲ့သည်။
၎င်းက “ဒီကိစ္စက ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုအကြီးကြီး မလိုအပ်ပါဘူး။ ထားဝယ်စီမံကိန်းကြီးကို မြေပေါ် ပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်နိုင်မယ့် အစပျိုးပမာဏလေးလောက်ပါပဲ”ဟု ရက်ချာဒမ်မရီလမ်းမရှိ Four Seasons ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်သော Thailand Focus 2012 ဖိုရမ်
ADB သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဘန်ရိုင်-ကန်ချနဘူရီလမ်း ဖောက် လုပ်ရေးအတွက် နည်းပညာအကူ အညီပေးအပ်နေပြီး၊ ထိုင်းအဝေး ပြေးလမ်းဌာနသည်လည်း ဘန်ရိုင်မှ ကန်ချနဘူရီသို့ ၉၈ ကီလိုမီ တာအရှည်လမ်း (တန်ဖိုး ဘတ် ၄၅ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ)ကို ဖောက်
လုပ်နေသည်။ ဖူနမ်မရွန် နယ်စပ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်သို့ သွားသော လမ်းပိုင်းကိုလည်း လေ့လာမှုများ စတင်ပြုလုပ်နေပြီး၊ ဖူနမ်မရွန်မှ ထားဝယ်သို့ ၁၆၀ ကီလိုမီတာ အရှည်လမ်းကို ဒီဇိုင်းအပြီးသတ် ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
ADB သည် ထားဝယ်စီမံ ကိန်း၏ ဆောက်လုပ်ရေးကို တာ ၀န်ယူလုပ်ကိုင်နေသော အီတာ လျံ-ထိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီနှင့်ဆွေး နွေးမှုများရှိနေပြီး၊ ယင်းကုမ္ပဏီ ဘက်ကမူ ADB သို့ ချေးငွေရယူ ရန် တရားဝင်တောင်းဆိုမှုမရှိသေး ကြောင်းသိရသည်။
ထားဝယ်စီမံကိန်းအတွက် ပထမအဆင့် တည်ဆောက်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် ကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဘီလီယံ လိုအပ်မည်ဖြစ်ကာ စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် စုစု ပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံရှိမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းရန်ပုံငွေများကို အသေအချာ
မတွက်ချက်ရသေးကြောင်း မစ္စ တာစတက်ဖင်ဆန်ကပြောသည်။
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အလုပ်နေရာပေါင်း ၅,၀၀၀ ခန့် ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဟုသိရသည်။
Posted by drmyochit Saturday, September 01, 2012, under ကာတွန်းများ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား အမေရိကန်မှ ဗီဇာကန့်သတ်ထားမှု ပယ်ဖျက်
မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ခရီးသွားလာခွင့် ဗီဇာကန့်သတ်ထားမှုကို သမ္မတ အိုဘားမားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွက် ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် လာမည့် လာအတွင်း ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ တက်ရောက်ရန် အမေရိကန်သို့ လာရောက်သည့် အခါနယူး ယောက်ခ်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ် အနီးပတ်ဝန်းကျင်သာမက အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း AFP သတင်းက ပြောကြားသည်။
သေဆုံးပြီးသူ များ မြန်မာပြည် သွားနိုင်ပြီ
Black List ထဲကနေပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားသားအမည် တထောင်ကျော်ကို
သမ္မတရုံးက ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ရာမှာ သေဆုံးသူတချို့ရဲ့ နာမည်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။
- ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟောင်း ကိုရာဇန်အကွီနို၊
- သတင်းစာဆရာ ကြေးမုံ ဦးသောင်း၊
- အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း Sonny Bono တို့ရဲ့ အမည်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
နာမည်ပျက်တခုကတော့ တက္ကသိုလ်တခုရဲ့ အမည်ပါ။ Mcgill University တဲ့။ နံပါတ် ၄၉၈ မှာပါ။ တက္ကသိုလ်တခုလုံးကို အမည်ပျက်ထဲ ထည့်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေခေတ်တုန်းက အဲဒီလိုထည့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။
Black List တွေကို ပုံမှန်အားဖြင့် လျှို့ဝှက်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အရာရာလျှို့ဝှက်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဒီစာရင်းက ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်တခု ဖြစ်ခဲ့ပုံပါပဲ။ “အရပ်သား”အစိုးရ တက်လာပြီး တနှစ်ကျော်ကြာမှ ဒီစာရင်းကို တည်းဖြတ်ပြီး ဖယ်လိုက်တဲ့နာမည်တွေကို ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။
နာမည်တွေကို ဘယ်ကာလတုန်းက ဘာကြောင့် ဒီစာရင်းထဲ ထည့်ရသလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးမထားပါ။
771 Vicky Bowman – British.
496 Maureen Aung Thwin – USA(Ex-Myanmar)
(ဒေါ်မိုရင်းအောင်သွင် – director of the Burma Project/Southeast Asia Initiative at the Open Society Foundations)
69 Moe Thee Zon(a) Moe Thee (a) Myo – USA citizen (Ex-
741 Tiger Yawnghwe – -
136 Aung Bala – USA
(သတင်းစာဆရာ အောင်ဗလ ခေါ် ကြေးမုံဦးသောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်)
141 Aye Kyaw, Dr – Myanmar
636 Salai Tun Than – Myanmar:
53 Kyi May Kaung – Ex-Myanmar
497 Mawdsley, James Rupert Rsusell – British
468 Lintner, Bertil – Sweden
1134 Mr. Bertil Lintner – နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်
185 Bo Bo Kyaw Nyein – USA
188 Bo Bo Kyaw Nyein – Ex-Myanmar
2 Aris, Alexander – British
ဒေါက်တာ ထွန်းအောင် (ခ) နူရာဟတ် အား နိုင်ငံခြားငွေမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် ချမှတ်
မောင်တော ဆူပူ အကြမ်းဘက်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဒေါက်တာထွန်းအောင်(ခ) နူရာဟတ်အား ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားငွေလှဲလှယ်မှု စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မ -၂၄ (၁) ကိုကျူးလွန်ကြောင်း ၀န်ခံသဖြင့် အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ်ကျခံစေရန် သြဂုတ်လ (၃၀) ရက်နေ့က စစ်တွေ ခရိုင်တရားရုံးမှ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နူရာဟတ်(ခ) ထွန်းအောင်အား ပြစ်မှုပုဒ်မ -၁၅၃-က / ၅၀၅ (ဂ) /၁၄၈ ဖြင့်၎င်း၊ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း ၆(၁) ဖြင့်၎င်း၊ နိုင်ငံခြားငွေ -၂၄(၁) ဖြင့်၎င်း၊ပြစ်မှုပုဒ်မ -၄၆၈ /၄၂၀ ဖြင့်၎င်း၊ အရေးပေါ် စီမံမှု -၅ (ည) ဖြင့်၎င်း အမှုငါးမှုဖြင့် စွဲချတင်စစ်ဆေးလျက်ရှိရာ နိုင်ငံခြားငွေ အမှုတစ်ခုကိုသာ အပြီးသတ်စီရင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ အီရန် ပါဝင်လျက် ရှိကြောင်း ဘန်ကီမွန်း ပြောကြား
(တီဟီရန် သြဂုတ် ၃ဝ)
အီရန်နိုင်ငံသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ မှ ပါဝင်လျက် ရှိကြောင်း (၁၆)ကြိမ်မြောက် ဘက်မလိုက် နိုင်ငံများ လှုပ်ရှား မှုအဖွဲ့ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် တီဟီရန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာစဉ် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေး မှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ထိပ်သီး အစည်းအဝေး၌ ဆီးရီးယား အရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အီရန်သမ္မတ မာမွတ်အာ မက်ဒီနီဂျက်၊ အစ္စလာမ်မစ် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် အယာတို လာခါမေနီတို့နှင့် ဆွေးနွေး သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘန်က ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဘန်ကီမွန်း သည် (၁၆)ကြိမ်မြောက် ဘက်မလိုက် နိုင်ငံများ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် အီရန်သံအမတ်၏ ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရပြီး၎င်း အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားသည့် အတွက် အီရန်အစိုးရကို ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း၊ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုသည့် အတွက်လည်း ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့ စေတနာ ၀သန် ဂီတ ရန်ပုံငွေပွဲကို SKY NET ရုပ်သံလိုင်းက တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသခွင့် ရလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးသစ် ဦးအောင်ကြည်ရဲ့ ပထမ ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ အခုလို ရေးသား ထားပါ တယ်။
“၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့က စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ၎င်းတို့ရဲ့ စေတနာဝသန် ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲကို SKY NET ရုပ်သံလိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခွင့်ပြုပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ထံ စာရေးသားတင်ပြခဲ့ ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုပါက သက်ဆိုင်ရာရုပ်သံလိုင်းက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေး ရန်သဘောတူ ထား ပါကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီတင်ပြချက်အပေါ် အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ရှုပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက တိုက်ရိုက် ထုတ် လွှင့် ခွင့် ခွင့်ပြုပေးလိုက်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ဦးဝီရသူ ဦးဆောင်မယ့် ဆန္ဒပြခွင့် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ရက်ရွှေ့ခိုင်းဖို့ ပြော
မန္တလေးမြို့မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဦးဆောင်မယ့် ရခိုင်အရေးသမ္မတဦးစိန်ရဲ့ရပ်တည်ချက်အပေါ် ထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က မူလကခွင့်ပြုထားတဲ့ ရက်မှာ ဆန္ဒပြခွင့်မပေးတာကြောင့်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်
ရတယ်လို့ ဆရာတော် ဦးဝီရသူက RFA ကို ဒီကနေ့ မိန့်ကြားပါတယ်။
မန္တလေးမြို့က မြို့နယ် (၅) ခုနဲ့ မတ္တရာမြို့မှာ သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ပြီး စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ ဆန္ဒပြဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ပေးမယ့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ အလှူပွဲအတွက် လုံခြုံရေး စီစဉ်ပေးရမှာဖြစ်တာကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲ တွေကို လုံခြုံရေးမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက ရက်ရွှေ့ကျင်းပဖို့ အခုလို ညွှန်ကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေနဲ့ နီးစပ်သူမြို့ခံတချို့ကတော့ မူလဆန္ဒပြမယ့် စက်တင် ဘာလ (၁) ရက်နေ့ဟာ ၀ါခေါင်လပြည့်် ဥပုသ်နေ့ဖြစ်တာကြောင့် ရဟန်းသံဃာတော်တွေ အများအပြား ပါဝင်ဆန္ဒပြကြမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် အခုလို ရက်ရွှေ့ဖို့ ညွှန်ကြားလိုက်တာလို့ ပြောပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးဝီရသူဟာ စက်တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့မှာ ချမ်းအေးသာစံ၊ မဟာအောင်မြေနဲ့ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်တွေမှာ ဆန္ဒပြမှာဖြစ်ပြီး၊ စက်တင်ဘာ ၃ရက်နေ့မှာ ပြည်ကြီးတံခွန် ၊ချမ်းမြသာစည် မြို့နယ်တွေနဲ့ စက်တင်ဘာ ၄ရက်နေ့မှာတော့ အမရပူရမြို့နယ်တွေမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ အသီးသီး ပြုလုပ်သွားဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ ပြည်မှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမယ့်သူ တွေကို သတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ချင်တဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ သတိထား ကြဖို့ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီ တွေကို အကြံပေးတဲ့Control Risk Group အဖွဲ့အစည်း ရဲ့အာရှ
ဒေသ ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ ဒိမ်း ချာမိုရိုက Dame Chammoro က ပြော ပါတယ်။
ဈေးကွက်သစ် ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံဟာ အခြေခံ အဆောက် အဦတွေ၊ ကျွမ်းကျင် လုပ်သားတွေ၊ ဥပဒေ စနစ်တွေ ငွေကြေး လွှဲပြောင်းတဲ့ စနစ်တွေ၊ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတာ တွေက ပြည်ပက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူတွေ ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကြိုတင် သတိပေး နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့လို ကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ရှက်ဗရွန်လို၊ တိုတယ်လို ကုမ္ပဏီကြီးတွေက လိုအပ်တဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု တွေကို သူတို့ ယူဆောင်လာပြီး နှစ်တွေ အကြာကြီး လုပ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့ ဥပမာနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြီး ဘီဘီစီက မေးတဲ့ အခါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ အပိုင်း ကတော့ တခြား လုပ်ငန်းပိုင်း တွေနဲ့ ကွာခြားမှု အနည်းငယ် ရှိပြီး ဒီကဏ္ဍ တွေမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ကလည်း ဈေးကွက်သစ် တွေမှာဝင်ရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ကြတဲ့ သဘာဝ ရှိတာမို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လာမယ် ဆိုရင်လည်း ကြိုတင် ပြင်ဆင် ပြီးသား ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ဘက်ကလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလိုချင်နေပြီး မကြာခင် ထွက်လာမယ့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ် ထဲမှာ နိုင်ငံခြားသား တွေကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ တချို့ကဏ္ဍ တွေမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခွင့် ပေးထား တယ်လို့ သိရပေမဲ့ သူတို့ အတွေ့အကြုံ အရ ဥပဒေ မူကြမ်း ဘယ်လိုပဲ ထွက်လာလာ နောက်ဆုံး အတည် ဖြစ်တဲ့ အခါ အပြောင်း အလဲတွေ ရှိနိုင်တယ်၊ အဲဒီ ဥပဒေကို လက်တွေ့ ဘယ်လို ကျင့်သုံး မလဲ ဆိုတာ ကလည်း အရေးကြီး တယ်လို့ ဒိမ်း ချာမိုရိုက ပြောပါတယ်။
အခု ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့ အခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး ချက်ချင်း ဝင်ရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ ရှိနိုင်သလို စောင့်ကြည့် ဦးမယ့် သူတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဥပဒေ ပိုင်းရော အခြေခံ အဆောက် အဦ ပိုင်းရော ပြုပြင်ဖို့ ချက်ချင်း မလွယ်ပေမဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူတွေ စိတ်ချ လက်ချ လာနိုင်အောင် အစိုးရအနေနဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်တာ က နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကို လက်တွေ့ လွယ်လွယ် ကူကူ ကျင့်သုံးလို့ ရနိုင်အောင်နဲ့ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ရှိအောင် ရေးဆွဲဖို့ လိုအပ်တယ်၊
လက်တွေ့ ကျင့်သုံးရာ မှာလည်း ပွင့်လင်း မြင်သာ ဖို့နဲ့ ဥပဒေကို ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားဘဲ ကျင့်သုံးဖို့၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူတွေ ဘက်က ကြိုတင်မှန်းဆလို့ ရနိုင်တဲ့ အခြေ အနေ မျိုးကိုလည်း ဖန်တီး ပေးဖို့ လိုတယ်လို့ အာရှ ဒေသ ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာကအကြံပြုပါတယ်။
ဥပဒေတွေ မူဝါဒတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်၊ အဲဒီ မူဝါဒတွေ အရ အစိုးရက ဆုံးဖြတ်ချက် တွေကို ဘယ်လို ချလေ့ ရှိတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်း လို့ရနိုင်မယ် ဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဘက်က ယုံကြည်မှု ရလာ နိုင်တယ်လို့ လည်း သူက ပြောပါတယ်။
(နယူးဒေလီ သြဂုတ် ၃ဝ)
အိန္ဒိယ အစိုးရသည် ရုရှား နိုင်ငံမှ နည်းပညာ များအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းဒုံးကျည် ငါးမျိုးကို ထုတ်လုပ် မည်ဖြစ်ပြီး နည်း ပညာအရ ပိုမို အစွမ်းထက်သည့် အဆိုပါ ဒုံးကျည်များအာ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဆိုပါက အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနေဖြင့် အဆင့်မြင့် ဒုံးကျည် စနစ်ကို ပိုင်ဆိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအခါ အိန္ဒိယ တပ်မတော် တွင် အနည်းဆုံး Smerch ဒုံးကျည် တပ်ရင်း နှစ်ရင်းကို ဖြန့်ချ ထားပြီး ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသည် အဆိုပါ ဒုံးကျည်များကို ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ရန် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်များစွာ အတွင်းကပင် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း သတိပေး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသောသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် များကြောင့်တိုင်းပြည်၏ ဘဏ္ဍာရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း ADB နှင့် သဘာဝ ဘေး
အန္တရာယ် လေ့လာရေးအဖွဲ့ Maplecroft အဖွဲ့က၂၂-၈-၂၀၁၂ ရက်တွင် သုံးသပ် ပြော
တောင်အာရှ ဒေသတစ်ဝန်းတွင် မိုးများနေသောကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေရာ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ဒေသတွင်း ဖွံ့ဖြိုးမှု အားကောင်းစ ပြုနေသော နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံအနေဖြင့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက အရှိန်ကောင်းစ ပြုလာပြီ ဆိုပေမယ့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် မျိုးစုံကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိလာနိုင်တယ်။ ဒါက ကိစ္စသေးသေးလေးလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ပြဿနာ အကြီးကြီးပါပဲ” ဟု ADB မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိများက ရန်ကုန်မြို့ ထရိတ်ဒါး ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပမည့် စာနယ်ဇင်း ပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
Maplecroft အဖွဲ့၏ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင် အစရှိသော နိုင်ငံများ အနေဖြင့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကို ထိခိုက်စွာခံစားရနိုင်ပြီး ပြန်လည် နာလန်ထူရေးတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းတွင် နိမ့်ကျမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု ကြိုတင်ခန့်မှန်း အကြံပေးထားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံက အာရှဒေသရဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ဘေးအန္တရာယ် အရှိနိုင်ဆုံး နိုင်ငံတွေထဲမှာ ပါနေတယ်လို့ ဂျာမနီက ပညာရှင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားတာ ရှိပါတယ်” ဟု ADB မှ လက်ထောက် စီးပွားရေး အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ မစ္စပါ့စ်ဆိုင်ယွန်းက ပြောကြားသည်။
""အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး တစ်စုက ရိုတ်သက်မူကြောင့် အတွင်းလူနာအဖြစ် နှုစ်လကျော်ကူးသ ခဲ့သော်လည်းသေဆုံး""
မလေးရှားနှိုင်ငံဂျိုဟိုပြည်တွင်နေထိုင်သောရခိုင် လူမျိုးသုံးဦးကိုအမည်မသိရိုဟင်ဂျာလူမျိုး တစ်စုက အကြမ်း ဖက်ရိုက် သက်မူ ကြောင့် နှုစ်ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိကာ တစ်ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းသတင်းရရှိသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ၆ လ ပိုင်း ၁၁ နေ့ က ""ဂျိုဟိုပြည်ကိုတာသိမ်ဂိမ် မှ"အိမ်မှာနေရင်း ရိုဟင်ဂျာလူ တစ်စုက၀င် ရောက်အကြမ်း ဖက်သွားကြောင့်သေဆုံးသွားသူ၏အတူနေ ကိုထွန်းဝင်းက ရွှေမြန်မာမီဒီယာသို့ ယခုလို ပြောသည်။
""ပထမတော့ လူနှုစ်ယောက် ကျနော်တို့အိမ်ကို တခါးလာခေါက်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးပါတဲ့ ရခိုင်လို ပြောပြီးတော့ အိမ်ထဲမှာစကားပြောချင်ပါတယ်။ ၀င်ပါရစေနော်ဆိုပြီးပြောပါတယ် ။။ပထမတော့အေးဆေးပြောပါတယ်။
( သေဆုံးသွားသူ အောင်ဇော်မိုး၏အလောင်း) (ဓါက်ပုံရွေမြန်မာမီဒီယာ)
စကားတွေ ပြောရင်းနဲ့တစ်ယောက် ကအိမ်သာသွားချင်တယ်တဲ့ ။တစ်ယောက်ကျနော်တို့ နဲ့ စကား ပြောနေတယ်။အိမ်သာထဲမှာဖုန်းခေါ်သံတော့ကြားရပါတယ်။သိပ်မကြာပါဘူး။လူအုပ်တစုရောက်လာပြီး.တုတ်တွေ ဓါးတွေနဲ့ ရောက်လာကြတယ်။အခန်းထဲကို ရှိတဲ့ လူတွေ အကုန်ဝင်ရိုက်ပါတယ်။
မင်းတို့ရခိုင်တွေ ကိုအကုန်အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးအကုန်ရိုက်သက်ပါတယ်။သုံး ယောက်ကအပြင်းအထန် ဒဏ်ရာ ရှိသွားပါတယ်"ဟုကိုထွန်းဝင်းပြောသည်။အဆိုပါရိုက်နှက်သက်မူကြောင့် သေဆုံးသွားသူမှာ အောင်ဇော်မိုးအသက်၂၄ ဖြစ်ပြီး။
သံတွဲမြို့ နယ် စပါးတန်ကျေးရွာဦးဖြူလှအောင်ရဲ့ သားဖြစ်သည်ဟုသိရသည်.။
အောင်ဇော်မိုးကို ဂျိုးဟိုးဆေးရုံးကြီးတွင်အတွင်းလူနာအဖြစ် နှုစ်လကျော်ကူးသခဲ့သော်လည်းအတွင်းဒဏ်ရာ ပြင်းထန်း သောကြောင့်၂၄ ရက်နေ့ညနေတွင်သေဆုံးသွားပြီး ယခုလ၂၉ရက်နေ့ တွင်သဂြိုလ်ခဲ့သည်ဟုသိရသည်။
၀မ်းဗိုက်တွင်ဓါးဒဏ်ရာပြင်းထင်မူကြောင့် အတွင်ကလီစာများ ကြေမွသွားပြီးသေဆုံးသွားသည်ဟုသိရသည်။အဆိုပါပြင်း ထင်ဒဏ်ရာရသွားသူနှုစ်ဦးများ မှာ"ပျိုချေ"ဖြစ်ပြီး ဦးကျော်ဖြူရဲ သားဖြစ် သားဖြစ် ကာကျန်တစ်ဦးမှာမောင်မောင်ဖြစ်ပြီးမြေပုံမြို့ က ဟုသိရသည်။
ကြပ် သုံး ကြပ်
အိန္ဒိယစစ်ဘက်ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စင်း တိုက်မိသဖြင့် လေတပ်သာ...
KIA အား လေကြောင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် အစိုးရ ရှေ့တန...
ခုံရုံးကိစ္စသည် ပြည်သူ့အသံ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့မျှေ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေး...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြို...
အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က ထိုင်းအစိုးရကို ထားဝယ်သို့ ချ...
မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား အမေရိကန်မှ ဗီဇာက...
ဒေါက်တာ ထွန်းအောင် (ခ) နူရာဟတ် အား နိုင်ငံခြားငွေမ...
အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ အီရန်...
ဦးဝီရသူ ဦးဆောင်မယ့် ဆန္ဒပြခွင့် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ...
မြန်မာသဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု ထ...
""အကြမ်းဖက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး တစ်စုက ရိုတ်သက်မူကြော...